China Direct Thermal Label orinasa sy mpanamboatra | Fangda
* Fangda Direct Thermal Labels dia manana fahamendrehana amin'ny fahatsiarovan-tena, zavatra malefaka, tahiry tarehy fotsy fotsy ho an'ny fanontana farany ambony sy fitiliana tsy misy hadisoana azo antoka.
* Ny tendrena avo sy ny dity maharitra dia azo itokisana sy mahomby izay tena tsara amin'ny tontolo fampiharana hafa.
* Ny labozia fotsy sy matte mamirapiratra dia manome fanontana printy tsara ho an'ny mpanonta printy ambany sy ambany.
* Ny liner kraft kalandary vita amin'ny kalitao dia mateza ary mora esorina. Ny labelinay dia mety amin'ny fandefasana, ny famonosana, ny fanodinam-bokatra, ny fandraisana, ny fangatahana mandroso ary ny fitantanana lisitra sns.
* Fanamafisana ny fametahana adiresy mafana dia manome adhesion mahery amin'ny velaran'ny zavatra.
* Mifanaraka amin'ny mpanonta marika Zebra, Datamax, Santo ary marika hafa.
Fampiharana ny mari-pamantarana mafana mivantana:
* Ho an'ny fihodinana haingana na indray mandeha amin'ny fampiasana famantarana ny vokatra.
* Ny mari-pamantarana mivantana mivantana dia ampiasaina indrindra amin'ny rindranasa fiainana fohy toy ny marika parcel izay ampiasain'ny FedEx na UPS. Andro vitsivitsy monja no ilain'izy ireo mandra-pahatongan'ny fonosana amin'ny mpampiasa farany.
* Ho an'ny tapakila na marika fandefasana. Ireo dia mety hitondra vidiny, kaody barcode, adiresy, fomba fahandro sns.
* Fomban-dity lakaoly mafana miendrika Patent, fampandrosoana ho an'ny vokatra sy tontolo iainana samihafa
* Famolavolana namboarina azo alain-tahaka: haben'ny fotony isan-karazany, haben'ny voapaika sns
* Laboratoara fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina
* Manatanteraka ny fenitra REACH sy ISO.
* Fampidirana mitsangana: firakotra silika, fanaovana adhesive miempo mafana sy firakotra, fanontana, fanapahana faty… vita ao amin'ny atrikasa misy antsika manokana ny fizotrany rehetra.
Previous: Horonana taratasy mafana
Manaraka: Valopy feno fonosana PP